Lungisa ukungafezeki kolusu ngefotoshop ngokukhawuleza nangokulula | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UPablo Gondar | | Idizayini yeMifanekiso, Photoshop, Tutorials
Lungisa ukungafezeki kolusu kunye Photoshop Ifumanekile iyindumasi yomlingo wefashoni kunye nentengiso yeshishini, elawula ukwenza amanani abantu "abagqibeleleyo" besebenzisa ezi ntlobo zezixhobo. Photoshop Ukugqwesa ngokugqwesileyo yeyona nkqubo ilungileyo yokuphinda ufotwe kwakhona, iyasivumela ukuba senze konke esinokukucinga ngeziphumo zobungcali. Kule posi siza kufunda phatha izixhobo ezisetyenziselwa ukubamba kwakhona ulusu kunye nokususwa okungenasiphako (moles, imibimbi ...) nge Photoshop ixesha lime ngxi njengoko lisivumela ukuba sihlaziye.
Okokuqala sidinga ifoto enohlobo oluthile lokungafezeki kulusu ukuze sikwazi ukusebenza kwi-Pkwihotoshop. Nje ukuba sibe nefoto esiyivulayo Photoshop saqala ke ukusebenza.
Okokuqala, sivula ifoto en Ifoto Photoshop.
Nje ukuba ungene Photoshop sinezixhobo ezahlukeneyo zolu hlobo lomsebenzi:
Ukunyanga ibrashi / isixhobo sokuphilisa isixhobo seBrush
Ngasinye sezi zixhobo sinika indlela eyahlukileyo yokusebenza, imfihlo yesiphumo esifanelekileyo kukudlala nazo zonke xa usenza i-retouch yefoto.
La Isixhobo sesixhobo Ilitye Isebenza ngokuthatha isampulu eyenziwe yasebenza ngokucinezela isitshixo se-alt, isampulu kufuneka ibe kwindawo ekufutshane nesiphoso esifuna ukusilungisa. Kuya kufuneka sidlale ngokukhanya (kwimenyu ephezulu) ukuhamba (kwimenyu ephezulu) kunye nobulukhuni bebrashi. Kancinci kancinci sithatha iisampulu kwaye sisebenzisa i-buffer kwindawo esifuna ukuyilungisa.
Olunye ukhetho lokulungisa iziphene kulusu yi Isixhobo sepatch. Esi sixhobo fdibanisa ngokukhetha, Senza Ukukhetha isiphoso esifuna ukusilungisa kwaye emva koko sihambisa isikhombisi kwindawo esondele esikhumbeni engenalo naluphi na uhlobo lokungafezeki. Kuyacetyiswa ukuba uthathe iisampulu kufutshane ukuthintela utshintsho ekukhanyeni nasethunzini.
Isixhobo sepatch sinokukhetha ezimbini: umthombo kunye nendawo oya kuyo. la indawo ekuyiwa kuyo, Isivumela ukuba sikope indawo esiyikhethileyo, ngamanye amagama isivumela ukuba sikope imole, indumba, imibimbi kunye nezinye iintlobo zeziphene kulusu. Umthombo ukhetho, ikuvumela ukuba ukhethe kwaye ulungise imimandla ephosakeleyo.
Ibhulashi efihlakeleyo isebenza kakuhle Iyafana ne-clone buffer. Esi sixhobo ivumela ukuba silungise iindawo ngokugqitha kule ndawo ukuze ilungisweKuyenzeka ukuba uqokelele iisampulu nje nge-clone buffer.
Ukuze sikwazi ukulungisa zonke ezi mpazamo kulusu lwethu sisebenzisa ezi zixhobo sifuna kuphela ukuzisebenzisa ezinye kuba nganye inikezela ngamathuba ahlukeneyo. Inkqubo ye- ingcebiso ngexesha lomsebenzi ngu dlala kakhulu ngokukhanya, ukuhamba kunye nobulukhuni bebrashi.
Nje ukuba sicacelwe ngokusebenza kwezi zixhobo, siza kufaka uluhlu lweefilitha ulusu olugudileyo, olungenasiphako. Simele yenza ukhetho yommandla esifuna ukuwuthambisa ngaphambi kokufaka ezi zihluzo.
Ukuze usebenzise ezi zihluzo Kuqala kufuneka senze ukhetho lwendawo esifuna ukusebenza kuyo, kule meko sikhetha ulusu sisebenzisa i Isixhobo semaski esikhawulezayo. Le ndlela yokukhetha ivumela ukuba, njengebrashi, senze ifayile ukhetho oluchanekileyo nolulunge ngakumbi. Ukusebenza kwayo kulula kakhulu, kuqala nqakraza kwi icon ukuyenza isebenze, emva koko sikhethe isixhobo sebrashi kwaye siqale ukwenza ukhetho. Nje ukuba ukhetho lugqityiwe, kuya kufuneka sinike imask icon kwakhona, kamva umzobo uya kutshintshwa kukhetho. Ukugqiba ukuya kwimenyu ephezulu (ukhetho-lokuguqula) ukuguqula ukhetho kwaye sikwazi ukusebenzisa utshintsho kuphela kuloo ndawo ikhethiweyo.
Makhe siye Imenyu ephezulu (filter) kwaye sijonge ukufiphala kwegaussian, Sisebenzisa ukufiphala okuthambileyo de sifumane isikhumba esicocekileyo.
Ukugqiba, sisebenzisa esinye isihluzo ejolise ekunikeni ulusu ubunyani obuncinci kodwa ngaphandle kokubonisa ukungafezeki esikususileyo, kuba oku sijonga kwimenyu ephezulu (isihluzo) ingxolo nothuli, Sisebenzisa icebo lokucoca ulwelo oluthambe kakhulu de sifumane ulusu ngeenkcukacha.
Kuxhomekeke ekufotweni, kuya kufuneka sisebenzise uthotho lwamaxabiso ahlukeneyo kwizixhobo esizisebenzisayo, yiyo loo nto kubalulekile ukuba sifunde ukulawula ezi zixhobo kwaye sigqibelele ubuchule.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Photoshop » Lungisa ukungafezeki kolusu nge-Photoshop